သုံးလအတွင်းဆို အခွင်.အရေးကောင်း ရရှိမည်တဲ.။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သုံးလအတွင်းဆို အခွင်.အရေးကောင်း ရရှိမည်တဲ.။
သုံးလအတွင်းဆို အခွင်.အရေးကောင်း ရရှိမည်တဲ.။
Posted by ster on Jun 16, 2012 in Myanma News, News | 16 comments
နှစ်(၂၀)ကျော် ဖျက်သိမ်းယာဉ်များအနက် မအပ်သေးသော ကားများ သုံးလအတွင်း လာအပ်ပါက အခွင်.အရေးကောင်းများ ရရှိမည်။ နောင်မှ လာအပ်ပါက လက်ရှိပေးထားသော အခွင်.အရေးအတိုင်း ရရှိချင်မှ ရရှိနိုင်မည်ဆိုပါလား။ ဘာကို ပြောတာ
၁၆.၆.၂၀၁၂ နေ.မြန်မာ.အလင်း သတင်းစာ
နောင်မှအပ်ရင် အခွန်တိုးမယ် ဆိုတဲ.သဘောလား။
ဒါဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာပဲ..။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ တစ်စောင်က “လက်ရှိပေးထားသော အခွင်.အရေးအတိုင်း ရရှိချင်မှ ရရှိနိုင်မည်” ဆိုတဲ့ မတိကျ မရေရာတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကုို ထုတ်ထုတ်တတ်သေးတော့တယ်..။ ၃လအတွင်း အပ်ရင်အပ် မအပ်ရင် အမိုက်ဖြစ်ပြီဟေ့လို ပြောလိုက်ပါတော့လား..။
ကိုလူဟား ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောလိုက်ပါတော.လား။ ရှေ.တိုး နောက်ဆုတ်လို. ရအောင်လား။
ခု နေ လာအပ်ပြီး ရ တဲ့ အခွင့် အရေး ကို အပြည့် အ၀ ယူ လိုက် ပါ။
နောင် ဆို တာ မသေချာ ဘူးလေ။
တချို့ လူ တွေ တော် တော် နားကောက် တယ်။ ပါမစ် နဲ့လဲ ပေးတာ တောင် မလဲ ဘဲ နေတယ်။
ပါမစ်လောက် ကို မမက် ပဲ ကိုယ့် ကားဟောင်း ပဲ ဖက်တွယ် နေ တယ်။ သူထက် ကောင်းတဲ့ အခွင့် အရေး များ မျှော်နေတာ လား မသိ။
တချို့ ကားတွေ ဆို ဆရာ သမား တို့ တွေ့ ဖူးမှာ ပါ၊ လမ်း ဘေး ဒီအတိုင်း ရပ်ထားတာ နှစ် အကြာကြီး၊ တာယာ အောက်သားတောင် ဆွေးတဲ့ အထိ ရပ်ထားတာရယ်။
အ မှိုက် ဖြစ် ရော လား လို့ တော့ မမေး နဲ့ လေ။
သသဘော ကြီး သက်သက် ညာညာ နဲ့ တဆင့် ပြီးတဆင့် လာ မှာ ဘဲ။
အမှိုက် အဆင့် လောက် ဆို စည်ပင် က သိမ်း ပေး အုံး မယ်။
ပိုက်ဆံ ပေး ပြီးစွန့် ပစ် ရမယ့် အနေအထား ထိ တဖြေးဖြေး ရောက်အောင် သွား မယ် လို့ ထင်တယ်။
နောင်ဆိုတာ မသေချာတာတော. အမှန်ပဲ laypai ရေ။
ပါမစ်နဲ. လဲပေးတာ ဆိုပေမယ်. တချို.လူတွေက ကားအသစ် မသွင်းနိုင်ကြဘူးလေ။
အဲဒီလူတွေက ပါမစ်ရောင်းစားရုံပဲ ရှိတော.တဲ.သဘောဖြစ်သွားတယ်။
တယ်…ဒီသတင်…. ဟင်…. 10ပဲ၇လိုစိတ်တိုနေပါတယ်ဆို့….
တော်ပြီး…. အိမ်က ကား(ဆိုက်ကား) ကိုမီးရှိုးပစ်မယ်……..
(မော်တော်ယာဉ်မူဝါဒအနေဖြင်. နောင်တချိန် ပြည်တွင်းမှာ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်ချိန်တွင် ဖွံ.ဖြိုးဆဲ၊ ဖွံ.ဖြိူးပြီး နိုင်ငံများနည်းတူ မော်တော်ယာဉ် သက်တမ်းကို သတ်မှတ်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။) လို.ပြောထားတယ်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တွေ (၅) သက်တမ်းတိုးပေးတာတော. ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ် သက်သာသွားတာပေါ.။
နိုင်ငံပိုင် သတင်းက အတိအကျတော့ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ် ဘာအတွက်
ဘာမှလဲ ရေရေရာရာမဖော်ပြပဲ ခြိမ်းခြောက်နေတာကို မရှက်ဘူးလားမသိဘူး။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာအနေ
နဲ့ ဘာကြောင့်၊ဘာ့အတွက် ဆိုပြီးတိကျတဲ့သတင်းလေးတော့ဖော်ပြသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ ကလေးကလား
ဟုတ်ပါတယ် may flowers ရေ
ကားဟောင်းစီးနေတဲ. သူတွေအတွက် မအပ်ရင် နောက်ပိုင်း အခွန်တိုးမှာလား၊ နယ်ပို.မှာလား၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဖျက်သိမ်းမှာလားနဲ. ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်စရာပါ။
ချော့လဲခိုင်းပြီးတော့ … ခြောက်လဲခိုင်းတဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့ …. ။
နောက်ပိုင်းဆို … ငေါက်ပြီးများ လဲခိုင်းဦးမလား မသိဘူး
အပြောင်းအလဲ ခဏခဏဖြစ်နေတာနဲ. နောက်ဘာဖြစ်အုန်းမလဲ ဆိုတာ သာမန်လူတွေ မှန်းလို.မရတာပဲ။ အပ်ရတဲ. ကားချင်းအတူတူတောင် အခုနောက်ပိုင်းက အခွန်လျော.သွားပြန်ရော။ အဲဒီလို ဆိုတော. မအပ်သေးပဲ အခုမှအပ်မယ်. သူတွေက ပိုကောင်းသလို ဖြစ်နေတာပေါ.။ ကားသစ်သွင်းနိုင်တဲ. လူတွေအတွက် ပြောတာနော်။ မသွင်းနိုင်တဲ.လူတွေကတော. ဘာလုပ်ရမှန်း သိမှာမဟုတ်တော.ဘူး ထင်တယ်။ ဆက်စီးနေပြန်လဲ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်မှန်းမသိ၊ေ၇ာင်းပြန်တော.လဲ ဈေးကမရနဲ.။ account ဖွင်.ပြီး ၂၀၀၇ အထက် လူတိုင်းသွင်းလို.ရတယ် ဆိုတဲ. ကြေငြာချက်ကြောင်. ကားဟောင်းတွေအပ်လဲ ဘာမှမထူးတော.လို. မအပ်တော.တာကြောင်. ဒီကြေငြာချက် ထပ်ထုတ်ရတာ ထင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကားသစ်တွေ များလာမှာကတော. ကောင်းပါတယ်။ ကားသစ်မသွင်းနိုင်ပဲ ကားဟောင်းစီးနေတဲ. သူတွေတော. ကြေကွဲပေါ.။
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေခွန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေ၊ သင်္ဘောသားတွေကို ပေးတဲ့ပါမစ်တွေကော အခွန်လျော့လား
ဟုတ်ပါတယ် ma may flowers ရေ
သင်္ဘောသား ပါမစ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ မသိဘူးနော်။